Hormoonka ragga. Maxay yihiin iyo shaqooyinka ay qabtaan | Ragga Stylish
Hormoonnada ayaa ah, guud ahaan, borotiinno ama steroids oo mas'uul ka ah u qaadista amarrada qaarkood xubinta u baahan in ay qabato falka. Qaababka gaadiidku u yahay dhiig iyo xaddiga hoormoonnada jirkeennu ku kala duwan yahay had iyo jeer, iyadoo ay ugu wacan tahay da'da, howlaha maalinlaha ah iyo qaab nololeedkeenna. Qodobkaan waxaan uga hadlaynaa hormoonada ragga iyo ahmiyada ay u leeyihiin jirkeena.
Ha seegin kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan hormoonnada ragga iyo waxa ay ku shaqeeyaan mar walba.
1 Sidee Hormoonnada Lab u shaqeeyaan
2 Farqiga hormoon ee ragga iyo dumarka
3 Shaqada testosterone
4 Yaraanshaha testosterone
Sidee Hormoonnada Lab u shaqeeyaan
Hormoonnada waxaa lagu soo saaraa qanjidhada 'endocrine qanjidhada'. Caadi ahaan, waxaan ka hadlaynaa qanjirka 'thyroid', 'gonads', iyo 'pituitary'. Xagga dumarka, iyagana mandheerta ayaa laga soo saaraa. Hormoonnadan waxay noqon karaan labadaba steroids iyo borotiinno. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah. Hadday tahay borotiin, markay gaadho xubinta dalbaysa calaamadaha, waxay ku xidhan tahay qabtaha xuubka unugyada. Marka ay ku xidho qabtahan, waxay bilaabaysaa inay qabato shaqadeeda.
Haddii aan ka hadalno hormoonka hormoonka ee steroid, isagoo yar, awoodaan inay galaan qolka kuna xidho qabtaha laga helo cytoplasm-ka. Marka lagu xidho soo-dhowraha, hormoonnada waxay qabtaan hawlo gaar ah oo ku kala duwanaan kara noocyo badan. Waxay noqon kartaa in tallaabada hormoonkani ay tahay in la soo saaro hormoon kale si loo sameeyo hawl kale. Waxay sidoo kale fulin karaan ficilo ku saleysan baahida jirka ee su'aasha ah. Tusaale ahaan, hoormoonka insulin-ta ayaa mas'uul ka ah dheef-shiid kiimikaadka sonkorta dhiigga iyo yaraynta, heerarka oo xasilloon.
Farqiga hormoon ee ragga iyo dumarka
U fiirsashada aan ka helayno ragga iyo dumarka way ka duwan tahay. Tani waa mid ka mid ah sababaha keena in dabeecadda guud ee ninka ay go’aamiyaan hormoonnadiisa ragga, sida haweeneyda ay u dejiso kuwa dumar ah. Si kastaba ha noqotee, hormoonnada waa isku mid.
Ku urursanaantan ayaa aad ugu kala duwan kuwa galmada iyo xubnaha ay ku shaqeeyaan. Marka laga hadlayo ragga, androgens waa hormoonnada ragga heer sare heer sare ah, sidaas darteed, waxay ku jiraan feejignaan ballaaran. Marka la eego dumarka, estrogens waa hormoonnada leh isku-uruurinta ugu sareysa.
Waxaan qori doonnaa oo qeexi doonnaa hormoonnada ugu muhiimsan ee aadanaha.
Hormoonkaas Waa hormoonka ragga ugu caansan. Isha ugu weyn ee wax soo saarku waa xiniinyaha unugyada ee ku yaal meelaha u dhexeeya bartamaha.
LH. Waxaa loo yaqaan unugyada Leydig. Waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin soo saarista testosterone. Si tan loo sameeyo, waa inay helaan dhiirrigelin si loo soo saaro. Waxay ku taal pituitary-ka hore ee jirka.
FSH Hormoonkan waxaa laga helaa tuubooyinka seminiferous ee shahwada lagu sameeyo.
In badan ayaa laga yidhi iyada. Waxaa la sheegaa in ninka ugu testosterone badan uu noqon doono midka ugu quruxda badan, ugu codka badan uguna dagaalka badan, taxaddar la’aan iyo dabeecad aan la saadaalin karin. Ilaa intee in le'eg ayay tani run tahay? Waxaan si faahfaahsan ugu sharaxeynaa doorka testosterone ee ragga.
Sida badanaa loo sheego, testosterone ayaa leh ficil toos ah oo ku saabsan koritaanka axillary, pubic, jirka iyo timaha wajiga. Kobaca timuhu wuxuu ku kala duwan yahay noocyo kala duwan. Waxay sidoo kale ku shaqeysaa xargaha codka oo weynaataa wax badan ama ka yar, taasoo keenta cod jilicsan ama jilicsan. Waxay muhiim u tahay horumarinta murqaha, yeelashada saameyn anabolis ah waxayna kicisaa koritaanka qanjirka 'prostate', iyadoo laga fogaanayo dhibaatooyinka dambe sida Prostatitis.
Ragga leh qaddarka badan ee testosterone waxay u muuqdaan inay leeyihiin vesicles waaweyn oo waaweyn sidaas darteed guska weyn sidoo kale. Biyo bax waxay kuxirantahay gabi ahaanba kacsiga iyo libido tanina waxaa ku kordhay testosterone. Markasta oo ay manidu ku jirto xiniinyaha, waxay u badan tahay inay abuurto shahwad waxayna u badan tahay inay haweeneydu uur qaadi karto.
Soo koobiddu waxay tahay inay mas'uul ka tahay sameynta wiil u beddelo nin isla markaana uur qaado haweeney. Jiilka hormoonkan ragga ah wuxuu ka bilaabmaa maskaxda. Maaddaama jidhku gaadho heer muuqda oo qaan-gaadh ah, wuxuu bilaabaa inuu ku soo saaro hormoonkan hypothalamus. FSH iyo LH waa waxa kicin kara xiniinyaha si loo soo saaro testosterone oo loo bilaabo inuu yeesho bucshiro, kilkiil iyo timaha jirka.
Xagga dumarka, libido waxay kuxirantahay xaddiga androgens-ka kuwana waa qadar yar. Waxay ka soo baxaan ugxan sidaha iyo adrenalska waana sharxi karaan sababta, guud ahaan, dumarku aysan aad uga fikirin galmada. Marka xaaladan oo ah rabitaan la'aanta galmada ay ku dhacdo nin, ma jirtaa wax dhiman testosterone? Aynu aragno saameynta ay ku leedahay iyo waxa laga yeelayo xaaladaha noocan ah.
Marka dhaqtarku ogaado cillad yaraanta hormoonkan ragga ah, waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay cillad soosaariddiisa xagga xiniinyaha xiniinyaha oo isbeddelaya awgeed. Waxay kaloo noqon kartaa maxaa yeelay LH ayaa ka yar. Haddii kiisku yahay kii hore, bukaanka waa in lagu daaweeyaa testosterone dheeraad ah si loogu daro jirka. Haddii ay dhacdo la'aanta LH, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in lagu daaweeyo LH, maadaama tani ay tahay tan kicinaysa soo saarista testosterone.
Si aad u ogaato haddii testosterone kaa maqan yahay, waad ku aqoonsan kartaa calaamadaha qaarkood sida:
Olollo kulul oo ay weheliso dhidid badan.
Cudurka lafaha ayaa sababa, lafaha lafahooda hoos udhaca cabirkooda iyo dhumucdooda.
Si weyn ayuu u yareeyaa rabitaanka galmada.
Waxaa jira a erectile dysfunction Dhibaato ka haysato haysashada ama kacsiga.
Daalka guud ayaa kordha.
Waxaad ka cabaneysaa nooc ka mid ah niyad jab ama xanaaq badan had iyo jeer.
Sidaad arki karto, hoormoonada ragga ayaa runtii door muhiim ah ka ciyaara waana waxa ka dhiga dabeecadaha caadiga ah ee ragga inay noqdaan kuwa lagu yaqaan. La soco cuntadaada, jimicsi samee maalin kasta oo ilaali heer nololeed oo aan culeys badani saarnayn. Tilmaamahan, waxaad ku baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan hormoonnada ragga iyo shaqadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Hormoonka ragga